Android ဖုန်းမှဓာတ်ပုံများကို Mac သို့ပြောင်းရန်ရွေးစရာများ။ ငါက Mac ကပါ
ဓါတ်ပုံများကို Android စက်တစ်ခုမှ Mac သို့လွှဲပြောင်းရန်ရွေးစရာများ
¿Samsung မိုဘိုင်းမှဓာတ်ပုံများကိုကွန်ပျူတာသို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း? Mac သုံးစွဲသူအများစုသည် iPhone တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ကြသော်လည်းဤနည်းဥပဒေသည် ၁၀၀% မှန်ကန်မှုမရှိပါ။ အကြိမ်များစွာ၊ အထူးသဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် iPhone 100 နှင့်6Plus တို့ရောက်ရှိလာချိန်တွင်ပိုမိုကြီးမားသောဖန်သားပြင်များနှင့်အတူကိရိယာများကိုစတင်ရန် Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီကိုအချိန်ယူချိန်တွင်များစွာသောများသည်စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းမပြုမီ ၄.၇ ပါသောအသုံးပြုသူများဖြစ်သည်။ နှင့် ၅.၅ လက်မဖန်သားပြင်များသည် ၄ ​​လက်မအရွယ်ဖန်သားပြင်များကိုငြီးငွေ့လာပြီးစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိရန်နှေးကွေးခဲ့သည်။
အက်ပဲလ်ဟာဖန်သားပြင်အရွယ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီထွင်ဆန်းသစ်မှုအတွက်ဘယ်တော့မှမသိရပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ၅ လက်မအရွယ်အစားဟာကြော်ငြာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့စံနမူနာဖြစ်တယ်လို့ထင်ရလောက်အောင်ပုံရသည်၊ ငါတို့လက်မနှင့်လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် မြင်ကွင်းပေါ်ရှိရွေးချယ်စရာများအားလုံးကိုကြည့်ရှုပါ။ အထူးသဖြင့်ဒီလူအုပ်စုထဲငါပါ ၀ င်ခဲ့တယ် ကုမ္ပဏီက iPhone 5s ကိုတူညီတဲ့ရယ်စရာကောင်းတဲ့ screen အရွယ်အစားကိုထုတ်ပေးလိုက်တော့ ယှဉ်ပြိုင်တင်ဆက်ခဲ့ရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
လက်ရှိတွင်မူရင်းနှင့် third-party application များမှဓာတ်ပုံများအားလုံးကိုရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည် Android နဲ့ Mac ချိတ်ဆက်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူများကအကြောင်းအရာများကို Android စမတ်ဖုန်းထဲသို့ကူးယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) တွင်သူတို့အတွက် Mac အတွက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိနေသမျှဖိုင်များကိုကူးယူရန်ခွင့်ပြုသည်၊ ထုတ်ယူခြင်းမပြုဘဲ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များအတွက်မည်သည့်အခါမျှအမှန်တကယ်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းတွင်ရှိသည့်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုထုတ်ယူပါ။
1 ဓါတ်ပုံများကိုလွှဲပြောင်းရန် Android နှင့် Mac သို့ဆက်သွယ်ပါ
1.1 Image Capture ဖြင့်ဓာတ်ပုံများကို Android မှ Mac သို့လွှဲပြောင်းပါ
1.2 Android မှဓါတ်ပုံများကိုဓါတ်ပုံများအက်ပ်ဖြင့် Mac သို့ပို့ပါ
1.3 Preview မှတဆင့်
1.4 Android ဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်း
1.5 AirMore နှင့်အတူကြိုးမဲ့
1.7 SD ကဒ်မှတိုက်ရိုက်
2.1 ရုပ်ပုံအနည်းငယ်နဲ့ပတ်သက်ရင် ...
2.2 Google Photos ကိုသုံးပါ
2.3 Dropbox, OneDrive၊
ဓါတ်ပုံများကိုလွှဲပြောင်းရန် Android နှင့် Mac သို့ဆက်သွယ်ပါ
မသန်စွမ်း ဖိုင်များကို Android မှ Mac သို့လွှဲပြောင်းပါပထမ ဦး စွာကျွန်တော်တို့ Android device ကို USB connection မှတဆင့်ဆက်သွယ်ရမယ်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည့် Android ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍၊ Mac နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်လိုသောဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာပြလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ဆောင်လာသည့်အမှု၌ရွေးချယ်ရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည်။ ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းခြင်း (MTP) နှင့် Mass သိုလှောင်ခြင်းစနစ် (MSC)။ ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုလုံးကကျွန်ုပ်တို့ကိုဖုန်းနှင့် SD ကဒ်နှစ်ခုလုံးမှအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Mac သို့လွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ စက်ပစ္စည်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Mac နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးသောအခါရွေးချယ်စရာနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုကိုရွေးပြီးပါပြီ၊ အချို့ဆိပ်ကမ်းများတွင်ရွေးစရာတစ်ခုသာပေါ်လာလိမ့်မည်။ အောက်ပါ options များထဲကတစ်ခု။
Smart TV သို့ Mirror Mac မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်
Image Capture ဖြင့်ဓာတ်ပုံများကို Android မှ Mac သို့လွှဲပြောင်းပါ
OS X တွင်ထည့်သွင်းထားသည့် Image Capture application သည်စကင်နာများအပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆိုသိမ်းဆည်းထားသောဓာတ်ပုံများရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် Launchpad> Others သို့သွားပြီး Image Capture ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် application window ကိုပြလိမ့်မည်။ ထိုနေရာတွင်ချိတ်ဆက်ထားသော device ၏အမည်ကိုညာဘက်နှင့်ဘယ်ဘက်တွင်ပြလိမ့်မည် အားလုံးပုံရိပ်တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ် လက်ရှိစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ရှိသည်
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စမတ်ဖုန်းမှထုတ်ယူလိုသောပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအားလုံးကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းတို့ကိုသိမ်းထားလိုသည့်ဖိုင်တွဲသို့ရွှေ့လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုဆွဲရုံ။ သိုမဟုတ် application ၏အောက်ခြေရှိ option ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ရှိ Images album သို့တိုက်ရိုက်တင်ပို့နိုင်သည်။
Flash drive ကို FAT သို့မဟုတ် exFAT စနစ်ဖြင့် format လုပ်ပါ
Android မှဓါတ်ပုံများကိုဓါတ်ပုံများအက်ပ်ဖြင့် Mac သို့ပို့ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စမတ်ဖုန်းမှအကြောင်းအရာများကိုထုတ်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့သုံးနိုင်သည့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာဓါတ်ပုံများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓာတ်ပုံအက်ပလီကေးရှင်းကိုပိတ်ထားခြင်းမရှိပါကဓာတ်ပုံစာသားများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများပါသည့်ကိရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့ချိတ်ဆက်တိုင်း၎င်းကိုစမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်တိုင်းအလိုအလျောက်ဖွင့်နိုင်သည်။ Android သည် Photos app ကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်လိမ့်မည် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာများကိုဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများဖြင့်ထုတ်ယူလိုသည့်ကိရိယာ၏အကြောင်းအရာကိုပြလိမ့်မည်။
၎င်းဖွင့်လှစ်မထားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏ SD ကဒ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောအရာများအားလုံးကိုပြသနိုင်ရန်အတွက် Photos application ကိုနှိပ်ပါ။ အပလီကေးရှင်းကိုယ်တိုင်မှကျွန်ုပ်တို့သည်သိမ်းဆည်းထားသောအကြောင်းအရာကိုရွေးချယ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်သည့်ဖိုင်တွဲထဲသို့တင်သွင်းနိုင်သည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်သွင်းခြင်းဟုခေါ်သည်။ သွင်းကုန်ပြီးသည်နှင့်ဓာတ်ပုံများမှကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac သို့တင်သွင်းသောဖိုင်များအားလုံးကိုဖျက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းမှအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ပေါ်ရှိဖိုင်တွဲတစ်ခုထဲသို့ဆွဲတင်နိုင်သည်။
Launchpad အတွင်းရှိ Preview application သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောပုံရိပ်များကိုရရှိရန်လည်းခွင့်ပြုသည်။ ဤသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်လျှောက်လွှာကိုဖွင့ ်၍ "SD card name" မှ File> Import သို့သွားပါ။ ထိုအခါ ကိရိယာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်ရုပ်ပုံများအားလုံးပြလိမ့်မည် အခြားရွေးစရာများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ယူလိုသည့်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းတို့ကိုသိုလှောင်လိုသည့်နေရာတွင်သိမ်းဆည်းပါလိမ့်မည်။
Google သည် Mac အသုံးပြုသူများအား Android File Transfer application ကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်တက်ဘလက်ဖြစ်စေ၊ စမတ်ဖုန်းဖြစ်စေ PC ဖြစ်စေ၊ Mac ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ Android device ကိုချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့မှသာ၎င်းတွင်သိမ်းဆည်းထားသောအကြောင်းအရာများကိုထုတ်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်။ အသုံးမပြုခင် System Preferences> Security နှင့် privacy သို့သွားရပါမည် အက်ပလီကေးရှင်းမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုပါ။ မည်သည့်ဆိုဒ်မဆိုဒီလိုမှမဟုတ်ရင် Android File Transfer application ကိုသုံးလို့မရပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စမတ်ဖုန်း၏ပါဝင်မှုကိုထုတ်ယူနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ယူလိုသောအရာများကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းတို့ကိုသိမ်းထားလိုသည့် Finder ဖိုလ်ဒါသို့ဆွဲတင်ရုံသာရှိသည်။ ဒီ app က ကျွန်ုပ်တို့စက်ပစ္စည်း၏ပါဝင်မှုကိုရယူနိုင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည် အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ပ်တို့ပို့လိုသည့်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသိုလှောင်ထားသည့်နေရာဖြစ်ပါကမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ပေါ်တွင်မဟုတ်ပါ။
AirMore သည် Android ဂေဟစနစ်အတွက်လျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သည် ဒါကကျွန်တော်တို့ကို Android စက်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသာမကကျွန်ုပ်တို့ကိုပါခွင့်ပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တွင်မည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားကိုမဆိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည် Android ကိုသုံးပြီးကေဘယ်ကြိုးတွေမပါဘဲအမြန်နှုန်းနဲ့အမြန်နှုန်းအချက်အလက်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးတယ်။
လျှောက်လွှာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင် download ဆွဲပြီးဖွင့်ရသည် AirMore ဝက်ဘ်ဆိုက်။ တခါဖွင့်ပြီးတာနဲ့ Mac နဲ့စမတ်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ဖို့ browser ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ code ကို scan ဖတ်ရပါမယ်။ ဒါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကြောင်းယုတ္တိ ကိရိယာနှစ်ခုလုံးကိုတူညီတဲ့ Wi-Fi ကွန်ယက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်.
ချိတ်ပြီးတာနဲ့ browser ကကျွန်တော်တို့ကိုပြလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal တွင်ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းထားသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံး ဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ တေးသီချင်းများ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ အဆက်အသွယ်များ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများအလိုက်အမျိုးအစားအလိုက်စီပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ယူလိုသောဓာတ်ပုံများကိုရွေးချယ်ပြီးပါက download ကိုနှိပ်ရုံသာကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ပေါ်တွင်စတင် download ပြုလုပ်နိုင်သည်။
doubleTwist Sync သည် iMazing နှင့်အလွန်ဆင်တူသည် ပိုကောင်းတဲ့ DiskAid အမည်ဖြင့်လူသိများ, သော ကျွန်ုပ်၏စက်ပစ္စည်းအတွင်းရှိအရာအားလုံးကိုအိုင်ဖုန်းကဲ့သို့ခွင့်ပြုသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်း၏အကြောင်းအရာအားလုံးကိုမြန်ဆန်စွာနှင့်အလွယ်တကူထုတ်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်၊ အခြားရွေးချယ်စရာများကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်တို့ Mac တွင်ကူးယူလိုသောပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအားလုံးကိုဆွဲယူသည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အမြန်ဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သာလုပ်ရန်လိုအပ်သည် micro SD ကို extract လုပ်ပြီးပိုကြီးတဲ့ SD card အတွက် adapter ထဲသို့ထည့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ထဲသို့ထည့်ပါ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်လိုက်သောဒေတာကဒ်အမည်နှင့်အိုင်ကွန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ၏ desktop ပေါ်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စက်၏ဒေတာအားလုံးသိမ်းဆည်းထားသည့်ကွဲပြားသောဖိုလ်ဒါများပေါ်လာလိမ့်မည်။ အများဆုံးနှင့်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများကို DCIM ဖိုင်တွဲတွင်သိမ်းဆည်းထားပြီး WhatsApp, Telegram, email မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောဓါတ်ပုံများကိုများသောအားဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသော DCIM ဖိုင်တွဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းမှဓာတ်ပုံနှစ်ပုံ၊ သုံးပုံ၊ လေးပုံကိုသာထုတ်ယူလိုပါကဤအရာအားလုံးကိုလုပ်ရခြင်းသည်အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းဓာတ်ပုံများကိုမျှဝေခြင်းသို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းရန်အမြန်ဖြေရှင်းနည်းလိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ဒါကဖြစ်ခဲ့ရင်၊ သင်လုပ်နိုင်တာအကောင်းဆုံးကတော့ - သူတို့ကိုစာဖြင့်ရုပ်ပုံများကိုပေးပို့ပါ သင်၏ Mac ကိုကူးယူပါ။
Google Photos ကိုသုံးပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ဖြင့်ဓာတ်ပုံများအားလုံးကိုအလျင်အမြန်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင် Google Photos application ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလျှောက်လွှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal မှကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုအားလုံးကို Google Cloud သို့တင်ပါကျွန်ုပ်တို့၏ Drive ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံး browser မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မှအလျင်အမြန်ရယူနိုင်သည်။
ဂူဂဲလ်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုမိုcloud်းတိမ်ဖြင့်စမတ်ဖုန်းမှပြုလုပ်သောပုံများသိုလှောင်ရန်ခွင့်ပြုသည် နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ resolution ကို 16 mpx ထက်မပိုပါဘူးအဖြစ်န့်အသတ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုအားလုံးကိုလည်းသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ဤအခြေအနေတွင်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ Drive အကောင့်တွင်အခမဲ့သိမ်းဆည်းလိုပါက 4k အရည်အသွေးရှိမှတ်တမ်းများအားလုံးသည် Full HD resolution သို့အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဂူးဂဲလ်ကိုအသုံးမပြုလိုလျှင်၊ အီးမေးလ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပို့သောအခါ (သို့) လက်ခံသည့်အခါတိုင်းသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုဆန့်ကျင်သောကြောင့်သင်ကဲ့သို့သောအခြား cloud သိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ Dropbox ကိုOneDrive၊ Mega၊ သေတ္တာ ဘရောက်ဇာမှတဆင့် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal မှကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများကိုအလိုအလျောက် upload ပြုလုပ်နိုင်စေသည်။ Full HD resolution ရှိဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအားလုံးကိုအကန့်အသတ်မရှိသိမ်းဆည်းရန်တစ်ခုတည်းသောဝန်ဆောင်မှုသည် Google ဖြစ်သည်။
သင်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပါသလား ဖိုင်များကို Android မှ Mac သို့လွှဲပြောင်းပါ? ဓာတ်ပုံများကိုမိုဘိုင်းမှကွန်ပျူတာသို့လွှဲပြောင်းရာတွင်သင်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုသင်ပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » ဓါတ်ပုံများကို Android စက်တစ်ခုမှ Mac သို့လွှဲပြောင်းရန်ရွေးစရာများ
29 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ဒီကိရိယာကပေါ်မလာဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ Toni၊ ဖုန်းကဘာလဲ။ Android File Transfer အက်ပ်ကိုသင်စမ်းသပ်ခဲ့သလား။ မင်းမှာဘာ OSX ရှိလဲ။
android ဖုန်း 2.3.6
အမှိုက်ပုံး။ သင်၏အချိန်ကိုမဖြုန်းတီးပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တွင် Galaxy S5 နှင့်နောက်ဆုံးမျိုးဆက် Macbook Air ရှိပြီးဤဖိုရမ်တွင်ရွေးချယ်စရာများမရှိပါ။ ဒီမှာအချိန်ဖြုန်းမနေပါနဲ့
ငါ Galaxy S5 ကို ၀ ယ်လိုက်ပြီ။ မင်းဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဆိုတာသိချင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းသောညဂျိုဒီ၊ ကျွန်ုပ်၏ motorola သံ rok မှဓါတ်ပုံများကို Mac pro သို့မည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးနောက်မှ pendrive တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ PhotoSync ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါမည်။ 😉
ဟယ်လို! ကျွန်ုပ်သည် "Android ဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်း" ကိုသုံးသည်။ သို့သော်မည်သည့်အရာများကိုကျွန်ုပ်ဖြတ်သန်းရမည်ကိုသိရန်သမ်းနေးပုံများကိုမတွေ့ပါ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ?
ဟိုင်း!!! Android မှဓါတ်ပုံများကို Bluetooth မှတဆင့် MacBook သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းနိုင်သနည်း။
မင်္ဂလာပါ YANETT၊ ဤအရာကိုစစ်ဆေးပါ - https://www.soydemac.com/photosync-transfiere-las-fotos-entre-dispositivos-y-el-mac/
ဓာတ်ပုံတွေအလယ်မှာကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီးအဆိုးဆုံးကတော့သူတို့ကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါဖျက်ပစ်လိုက်တာပါပဲ ။fffff အရာရာတိုင်းဟာပုံရိပ်နဲ့ပျောက်သွားတယ်။ Mac ရဲ့ဒီဟာကတခြားသူတွေနဲ့သဟဇာတမဖြစ်ခြင်းဟာငါ့ကိုငြီးငွေ့စေတယ်……
တူညီသောပြSameနာ။ ဒီကိရိယာကပေါ်မလာပါဘူး၊ android file transfer ဟာအသုံးမကျဘူး။ ၎င်းသည် device ကို (ပုံမှန်အားဖြင့်အဟောင်း android ဟောင်းကို) သိရှိသောအခါ၎င်းသည် hard disk သို့ပြောင်းလဲပြီး desktop ပေါ်တွင်ပြproblemsနာမရှိဘဲတပ်ဆင်နိုင်သည့် option သည် android တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် mass storage သိုလှောင်မှုဟုခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖိုလ်ဒါများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အပို application များမလိုအပ်ပါ။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည် Woxter မှဖုန်းအသစ်ဖြစ်သော Galaxy tab2တွင်ကြုံတွေ့ရသည်။ ငါမှာ Pm ကအလုပ်လုပ်တဲ့ fnac ကနေ crappy တက်ဘလက်ရှိတယ်။
amolestalo ဒိုင်လူကြီး ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတယ် !! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဇိမ်ခံဆွဲယူမှု၊ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းရန်ကျန်ရှိနေသေးသောတစ်ခုတည်းသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားဖုန်းအား“ USB မှတစ်ဆင့် Camera mode (PTP) မှအနည်းဆုံး ZTE Blade V580 တွင်ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ နှင့်အတူမည်သည့်ပြwithoutနာမရှိဘဲလွှဲပြောင်းစတင်ခဲ့သည်။
ငါတင်ပြချက်၌သင်ဖော်ထုတ်ထားသောအခြားရွေးချယ်စရာများကိုကျွန်ုပ်မကြိုးစားခဲ့ပါ၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းကောင်းပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိပုံစံ (Mac-android) တွင်ရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိပုံစံကိုဖော်ထုတ်ပါမည်။
ငါ Chrome browser ကိုယ်တိုင်မှတဆင့်အရာအားလုံးကိုသုံးတယ်။ extension / application "airdroid" ကိုထည့်လိုက်တယ်၊ မင်းကသင်၏ chrome session မှာပိုကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့လျှင်၊ သို့မဟုတ်၊ မရှိမဖြစ်အရေးကြီးသည်ဆိုလျှင်၎င်းတွင် Mac အတွက်၎င်း၏အက်ပလီကေးရှင်းရှိသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်သုံးသည် Chrome application အနေနှင့်သင့်အနေဖြင့် android တွင် airdroid ကိုလည်းတပ်ဆင်ထားရပါမည်။ ထို့နောက်၎င်း application ကို chrome တွင်ဖွင့်ပါ၊ android တွင်ဖွင့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် mobile app ရှိသည့် qr code scan ကို အသုံးပြု၍ url သို့မဟုတ်ပိုကောင်းအောင်ထားပါ။ macd ပေါ်ရှိ chrome မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကုဒ်နှင့် Vuala ရှိမိုဘိုင်းဖိုလ်ဒါအားလုံး၊ ဓာတ်ပုံများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ မိုဘိုင်းကိုယ်နှိုက်၏ crontrol နှင့်မိုဘိုင်းနှင့်သင်လုပ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။ သူတို့ကိုငါကေဘယ်လ်ကြိုးနဲ့မချိတ်ဆက်ထားတာကြောင့်မိုဘိုင်းမှာကွန်ရက်တစ်ခုတည်းမှာရှိပြီး Mac လည်းရှိတယ်။ (လည်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်)
ကျနော့်အမြင်အရဆိုရင်တော်တော်လေးပြီးပြည့်စုံပြီးအလွန်ထိရောက်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကကျွန်တော်တခြားစနစ်တွေကိုသုံးခဲ့တယ်၊ အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လောက်တော့ဒီဟာကကျွန်တော့်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းက chrome ကို extension တစ်ခုအနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်၊ ကမ္ဘာ၏မည်သည့် pc သို့မဟုတ် mac များတွင်သင်၏ session ကိုဖွင့်ပါ၊ ၎င်းတွင်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ ) ဒါကြောင့်သင်က၎င်းကိုသင်၏ session နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ကပြောခဲ့ဖူးသော်လည်းမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
အရောင်များကိုအရသာခံစားရန်နှင့်အခြားအသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာကိုဖွင့်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအနည်းဆုံးကြိုးစားကြည့်ပါ။
နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်အလွန်ကောင်းသော post ကိုဆိုပါတယ်ခဲ့ရာ
မင်းရဲ့ရှင်းပြချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာလူတိုင်းလိုလိုပြproblemနာရှိနေတယ်။ android Galaxy (အသစ်) နှင့် Macbook air (လွန်း) နှင့်ဘာမျှမ………။ Apple သည် Apple နှင့်နားလည်သည်ထက်ပိုမိုနားလည်သည်။
ကြွင်းသောအရာအဘို့, သင်အမြဲထူးဆန်းတဲ့လှည့်ကွက်သို့မဟုတ်ဤအကြောင်းကိုအလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတစ်စုံတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုဖို့ရှိသည်။
Ignatius ခန်းမ ဟုသူကပြောသည်
ဆောင်းပါးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟာ Xperia Z3 နဲ့ Android 4.4 ပါတဲ့ပုံမှန်စမတ်ဖုန်းကိုသုံးပြီးရွေးခဲ့တယ်။ Android File Transfer ကလည်းသင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူးလား။ ဒါကပြterminနာမရှိပဲဆိပ်ကမ်းအားလုံးမှာအလုပ်လုပ်တယ်။
Ignacio Sala သို့ပြန်သွားပါ
Adrian gonzalez ဟုသူကပြောသည်
Sunshine ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ တကယ်တော့ငါက Samsung S5 နဲ့ Mac ကြားမှာအလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ သူက Cloud service ကိုအသုံးမပြုတဲ့အတွက်ဖိုင်တွေကိုမြန်မြန်ပို့နိုင်ပြီးသူတို့ကစက်ပေါ်မှာသိမ်းထားလိုက်တယ်။ ထိုအခါမူကား, မိုthe်းတိမ်၌ရှိသကဲ့သို့, သင်ဒေါင်းလုပ်မပါဘဲမိုဘိုင်းကနေဖိုင်တွေဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အမှန်မှာ Sunshine သည်အလွန်ကောင်းသည်
Adrian Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
Gaby muñoz ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို ! ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်၏စမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Samsung J7 မှ desktop desktop သို့လွှဲပြောင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် "Android File Transfer" အက်ပလီကေးရှင်းကိုပင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ပုံများသို့မဟုတ် preview သည်ဓာတ်ပုံများနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မှထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။ မင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ဓါတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်မြင်သောအခါကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများမည်သို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရသနည်း၊ အလွန်သေးငယ်သော၊ မည်သည့်ဖြေရှင်းနည်းမဆိုကျေးဇူးတင်ပါသည်
Hugo Pineda ဟုသူကပြောသည်
ငါ AirMore ကိုသုံးပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာကျွန်ုပ်နှင့်မည်သူ့ကိုမျှမလုပ်နိုင်ခဲ့သည့်အရာကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ထောက်ခံချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Hugo Pineda အားစာပြန်ပါ
လုံးဝအသုံးမကျ, ပြproblemနာကငါ Mac နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ android device ကိုပေါ်လာပါဘူး။
ဒါကအဆင်ပြေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် YouTube tutorials တော်တော်များများကိုကျွန်တော်မကြည့်ခင်မှာ Mac ပေါ်ကနေ Huaweii ကိုတွေ့မြင်ဖို့သော့ကိုရှာမတွေ့ခင်အထိ။ စကားမစပ်, ငါ Mac အသစ်ကနေဆဲနှင့်ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ တင်သွင်းထားသောဓာတ်ပုံများကိုမည်သည့်နေရာတွင်သိမ်းဆည်းရမည်နည်း။
၎င်းအားလုံးသည်သင်အသုံးပြုသောနည်းလမ်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့ကိုသင်၏စမတ်ဖုန်းမှတိုက်ရိုက်ထုတ်ယူလျှင်သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကော်ပီကူး။ ကူးယူနိုင်သည်။
သင်သည် Photos application ကိုသုံးပါကတင်သွင်းသောဓာတ်ပုံများသည်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်အလိုရှိသည့်နေရာတွင်၎င်းကိုနောက်မှရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝမပါ ၀ င်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကူညီလိုပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တွင် sansung galaxi tab2ရှိပြီးဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ပြီးပြင်ပကဒ်သို့လွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားပါမည်။ အရမ်းများတယ်
ငါ AirMore ကို Xiaomi, Mac တို့နှင့်စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ။
သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုကူညီခဲ့တာကိုယုံတာရှက်စရာပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါသူတို့နားမလည်ဘူး၊ ဟွာဝေအမှတ်တံဆိပ်ဆဲလ်ဖုန်းရှိတယ်၊
ကောင်းပြီ၊ ငါနည်းလမ်းထောင်ပေါင်းများစွာကြိုးစားပြီးဒေါင်းလုတ်ဆွဲချ applications များနှင့်ဘာမျှမငါပုံရိပ်ဖမ်းယူနှင့်အတူကပြု။ အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ငါ shareit ဟုခေါ်သောပိုမိုလက်တွေ့ကျသောအက်ပလီကေးရှင်းကိုသုံးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမည်သည့်ပလက်ဖောင်းမှမဆိုကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသို့အလွယ်တကူလွှဲပြောင်းရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် bluetooh နှင့်ဆင်တူသော်လည်း၎င်း၊ လိုချင်တယ် ဒေါင်းလုပ် shareit ၎င်းသည် play store မှပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးထိုကဲ့သို့သောစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ကြော်ငြာမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်
Mac အတွက် Flip PDF ဖြင့် PDF ဖိုင်များကိုပြောင်းလဲနေသောအကြောင်းအရာအဖြစ်ပြောင်းပါ
AirPods သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်ကို ၂ ပတ်မှ ၂ ပတ်အထိလျှော့ချနိုင်သည်